तेस्रो राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्डको उपाधि पञ्चमुनिदेव मा.वि लाई - Tanahun Khabar
हरि खरेल / ढोरफिर्दी । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नं. ८ ढोरफिर्दीमा सम्पन्न शुक्लागण्डकी नगरपालिका विद्यालयस्तरीय तेस्रो राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्डको उपाधि पञ्चमुनिदेव माध्यामिक विद्यालयले हात पारेको छ । २७ विधामा सम्पन्न भएको खेलमा पञ्चमुनिदेव मा.विले १० स्वर्ण, ३ रजत र ७ कास्य गरि २० पदक सहित रनिङ शिल्डको उपाधि हात पारेको हो । जितसंगै पञ्चमुनिले रानिङ्ग शिल्डको ट्रफि, प्रमाण पत्र सहित १५ हजार रुपैया प्राप्त गरेको थियो ।
यसै गरि प्रतियोगितामा हंशबाहिनी मा.विले ५ स्वर्ण, ५ रजत र ३ कास्य गरि १३ पदक सहित द्धितीय भएको छ भने तालबेसी मा.विले २ स्वर्ण ७ रजत र ३ कास्य गरि १२ पदक सहित तृतीय स्थान हासिल गरेको छ । जित संगै द्धितीय र तृतिय हुने विद्यालयहरुले क्रमश ११ हजार २ सय ५०, ७ हजार ५ सय रुपैया साथमा प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका थिए ।
सरकारको तिनै तहमा खेल प्रदशन गर्ने खेलाडीहरुलाई हौसला प्रदान गर्न सके मात्र राष्ट्रले खेल क्षेत्रमा उपल्बधी हासिल गर्न सक्ने शुक्लागण्डकीका मेयर किसान गुरुङले बताए । खेलले मानिसहरुको व्यक्तिगत, शारिरीक मानसिक र आर्थिक विकासमा समेत सहयोग पुग्ने बताए । अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्यका लागि खेलकुद भन्ने मुल मन्त्रका साथ कार्यक्रमहरु आयोजना पनि सरकारले उत्कृष्ट खेलाडीहरुको खेलको कदर र सम्मान नहुदाँ त्यसै सेलाउदै जाने गरेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नगरका प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत गंगालाल सुवेदीले प्रतियोगितामा सहभागि नभएका विद्यालयहरुले पराजित भएको मानसिकता बोकेको बताए । कार्यक्रमहरुमा जित मात्र नभई सहभागि हुदाँको अनुभवले पनि धेरै कुरा सिकाउने बताए ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष माधव भट्टराईको सभापतित्वमा सम्पनन कार्यक्रममा नगर प्रवक्ता खिम बहादुर कुमाल, नगर शिक्षा शाखा प्रमुख नवराज चापागाई, वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष कृष्ण रेग्मी, वडा नं. ७ का वडाध्क्ष राम बहादुर थापा क्षेत्री लगायत विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक सहभागि रहेका थिए ।
राष्ट्रिपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता व्यवस्थापन तथा निर्देशन समिति शुक्लागण्डकी नगरपालिकाद्धारा आयोजित प्रतियोगिता गाउँफर्काेदय मा.विको खेलमैदानमा ३ दिनसम्म संञ्चालन भएको थियो ।